Indawo yolondolozo lwendalo | Tyelela uHultsfred
Amava endalo yemilingo yaseSmland ngobuhle bayo. Amahlathi athandekayo ashiyeke engafakwanga kwizizukulwana, amachibi amenyezelayo kunye namatye amakhulu agqunywe moss. Zonke zizityebi kwizityalo nakwizilwanyana. Ubusazi ukuba baninzi abalishumi elinanye bolondolozo lwendalo abanokundwendwela kulo masipala wethu?
Ugcino lwendalo lweAlkärret
Indawo yolondolozo lwendalo iAlkärret yenye yezona ndawo zityebileyo zehlathi, kwaye iyathandwa ngamasele, iisalamanders kunye nezinye izityalo zasemanzini. Enkosi ngokubonelela ngesondlo kunye
Indawo yolondolozo lwendalo yase Knästorps
Indawo yolondolozo lwendalo iKnästorps yindawo eyahlukeneyo eneentlobo ezahlukeneyo zokuhlala ezifana namahlathi endalo afana nehlathi elixubeneyo, ihlathi lom-oki, ihlathi eliphawulwe ngomlilo, amadlelo avulekileyo kunye nemigxobhozo. Indawo yolondolozo lwendalo iKnästorps inentsalela yelali yenkulungwane ye-1700
Indawo yokugcina indalo
Indawo yokugcina indalo yaseLunden-sisiqwenga sendalo saseSmland xa intle kakhulu. Indawo yolondolozo lwendalo yaseLunden yinduli ende kunye nengqalutye entle. Ummango mnye
Indawo yokugcina izilwanyana yendalo
Indawo yokugcina izilwanyana yendalo, eyinxalenye yomqolo weVirserum, ithathwa njengelinye lawona mazwe anamandla eSweden. Xa iqhwa labuyela umva malunga neminyaka engama-10 000 eyadlulayo
IHulingsryd imi kumantla eLake Hulingen kwaye ibonelela ngendawo ekhuselekileyo yemilambo, amahlathi aluhlaza, amahlathi omileyo ompayini, amadlelo avulekileyo kunye namachibi afumileyo. Iindawo ezinkulu namhlanje
Indawo yokugcina indalo yaseLänsmansgårdsängen
Indawo yokugcina izilwanyana yendalo iLänsmansgårdsängen yindawo ethandwayo yokuhamba ecaleni kweVirserumssjön kwaye inemithombo emininzi emidala kunye emihle. Kwindawo ephantsi kwechibi, i-birch ikhula ngezinto ze
Indawo yokugcina indalo yaseKraskögle
E-Kraskögle, ihlathi lishiywe lingafakwanga kwizizukulwana. Indawo leyo ngumkhondo wokunyibilika kweqhwa. Amahlathi endalo alolu hlobo kunye nobukhulu bawo aqhelekanga kwi
Indawo yolondolozo lwendalo yaseGrönudde
Ummandla wonke waseGrönudde unesimo sehlathi lendalo, okt ihlathi eliyinyani elifanayo. Ihlathi elikulo ndawo liqukethe i-blocky heathy pine ihlathi kunye nehlathi elidala elidityanisiweyo elilawulwa yi-spruce
Sällevadsån intlango yolondolozo lwendalo
Kwintlambo iSällevadsån kuhlala ezinye zezilwanyana nezityalo ezisengozini enkulu eSweden. I-Sällevadsån yinxalenye yenkqubo yamanzi ka-Emån. Ukuhamba kwamanzi ngokukhawuleza kuthetha ukuba kuvulekile
Ugcino lwendalo oluqinileyo
I-Stensryd yindawo yokugcina ihlathi lendalo kunye nehlathi kunye ne-bog mosaic. Indawo yogcino iqulathe ihlathi le-Hällmark pine engcangcazelayo, imigxobhozo evulekileyo evulekileyo, amaxhaphozi kunye nepine bog. Ihlathi lincinci kwaye linalo
Indawo yendalo yeBjörnnäset
Ihlathi lokwenyani elinemithi emidala emide ejikeleze amatye agqunywe ngamabala. Indawo yolondolozo lwendalo iBjörnnäset ikumhlaba omkhulu e inkebosjön. Indawo ibekwe